Fandalinam-pinoana - FMFOI Internationale
Velona eo amin’ny Apostoly Benjamina ny herin’Andriamanitra ka maro ny olona resy lahatra fa marina ny teny toriany. Mba hitondrana azy ireo amin’ny batisan’ny fibebahana ahazoany fiainana mandrakizay dia misy ny «fandalinam-pinoana» na fianarana soratra masina.
Ny fandalinam-pinoana na fianarana soratra masina
Ampianarina soratra masina aloha ny olona resy lahatra ka manolo-tena, mba ahafantarany tsara ny sitrapon’Andriamanitra sy ny lalana izay tokony hizorany ao anatin’ny fanompoana raha te handova ny fiainana mandrakizay izy. Mampitombo finoana sy fahalalana ny fidirana amin’ity fianarana soratra masina ity sady mitondra fiovam-po sy fanafahana ary fiainam-baovao tanteraka.
Afaka mametraka fanotaniana
Mazava ho azy fa ny Apostoly Benjamina no mitarika ny fampianarana ary izany dia azo arahina mivantana amin’ny aterineto (streaming).
Tombony lehibe ny manatrika ny fampianarana satria dia afaka mametraka fanontaniana sy mifapiresaka mivantana amin’ny mpampianatra ny mpianatra.
Mandritra ny fotoam-piofanana dia efa azo lazaina sahdy fa mapndresy ny mapndali-pinoana satria betsaka eo, no afaka amin’ny fahazaran-dratsy nangeja azy an-taonany maro, sitran amin’ny aretina efa naha lany haiky ny mpitsabo sy ny manam-pahaizana, ireo namoy fo tamin’ny fiainana nitraka indray na koa ny asa fivelomana misokatra. Hihaino fijoroana vavolombelona.